Imaaraatka Carabta oo bilowday dhismaha saldhigooda milatari ee Berbera - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaImaaraatka Carabta oo bilowday dhismaha saldhigooda milatari ee Berbera
November 23, 2017 Puntland Mirror Somalia, Somaliland 0
Sawirka: Dekada Berbera.
Dubai-(Puntland Mirror) Shirkada Divers Marine Contracting LLC ayaa bilowday dhismaha saldhiga milatariga Isutaga Imaaraatka Carabta ee Somaliland.
Shirkada oo fadhigeedu yahay magaalada Shaariqa ayaa bilowday shaqada mashruuca kadib markii la siiyay qandaraaska mashruuca oo dhan $90 milyan bishii April ee sanadkan, maamulaha Cabdullaahi Darwish ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta Bloomberg ku sheegay.
Saldhiga ayaa laga dhisayaa meel u dhow xeebta magaalada Berbera, waxaana la filayaa in la dhammeeyo bisha June ee sanadka soo socda, sida uu sheegay maamuluhu.
Berbera waxay kutaalaa Gacanka Cadmeed, taasoo 260 km dhanka koonfurta uga beegan dalka Yemen, halkaas oo ciidamada Imaaraatka Carabta iyo xulufada Sucuudi Caraabiya ay kula dagaalamayaan falaagada Xuutiyiinta.
Saldhiga Imaataarka Carabta ayaa dhan 300 mitir si loogu taageero garoonka diyaaradaha militariga, oo ay ku jiraan maraakiibta badda si ay u ilaaliyaan Gacanka Cadmeed, sida uu sheegay Darwiish.
“Ma ahan deked ganacsi,” ayuu yiri maamule Darwiish. “Waxa kaliya ee loogu talagalay maraakiibta badda.”
Wasiirka arrimaha dibedda ee Somaliland, Sacad Cali Shire, ayaan si deg deg ah uga jawaabin xiriir ay la sameysay warbaahinta Bloomberg oo doonaysa faahfaahin dheeri ah. Sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Dibada Imaaraatka Carabta ayaan ka jawaab xiriirka Bloomberg.
Xasuusin: Warbixintan waxaa xuquuqdeeda leh Bloomberg, waxaa turjumay warsidaha Puntland Mirror.
December 25, 2017 Jabhadda Xuutiyiinta oo maamulka Somaliland uga digay saldhiga milatari ee Imaaraatka Carabta ka dhisanayo magaalada Berbera
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqayn cirka ah oo uu Mareykanku ka geystay koonfurta Soomaaliya, sida Taliska Mareykanka ee Afrika ay ku sheegeen bayaan. “Iyadoo lala kaashanayo Dowladda [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa hambalyo u diray Raysulwasaaraha Cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed, sida ay Jimcadii daabacday warbaahinta FANA ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa. Madaxweynaha Cabdiweli ayaa dhambaalka hambalyada [...]